Daafac Real Madrid Ee Marcelo Oo Qiimeyn Fiican Ku Garaacay Coutinho Iyo Dani Alves %
Inuu muuqaal ciyaareed cajiib ah uu ku qaadanayo Real Madrid, ayaa daafac dambeedka bidix ee Marcelo, waxay aysan hilmaamsiin Jamaahiirta Brazil, xili dalkooda uu isku diyaarinayo ka qeyb galka dhacda weyn ee Koobka aduunka oo Ruushka lagu qaban doono.
Qarankaan waxaa uu yahay mid kamid ah, kuwa bandhig qurxoon ka sameeya koobka aduunka, wuxuuna Marcelo, aadi doonaa isagoo xaalad fiican ku jifa fasal ciyaareedkan, islamarkaana sawiro fiican garoomada Yurub ka sameeyay.
Sida laga soo xigtay ‘Globoesporte’, Marcelo ayaa wuxuu yahay ciyaaryahanka ugu badan, kaasoo ay doonayaa taageerayaasha wadanka Brazil inuu kusoo bilowdo safka koowaad ee xulkaan uu hogaamiyo macalinka lagu magacaabo Tite.
Iyadoo wax ka badan 125,000 codad ay dhiibtay ayaa wuxuu ka hor-maray Marcelo xidiga Barcelona ee Philippe Coutinho iyo waliba daafaca PSG, Dani Alves, kuwaasoo kaalmaha labaad iyo saddexaad soo ukala galay, sida ay ugu ukala horeeyaan liiska.
Xidiga ay isku kooxda yihiin Marcelo ee Casemiro ayaa wuxuu soo galay kaalinta labaad, waxaana loosoo xushay inuu dookha koowaad uu noqdo.
Neymar ayaa wuxuusan ka ahayn codeynta, sababtoo ah inuu hada yahay mid dhaawac ah, islamarkaana ay ubadan tahay inuu ciyaari karo, wallow uu hada dhaawac dhanka Muruqa ah uu qabo, uuna Qaliin ku jiro.
Brazil ayaa kamid ah, xulalka ugu cad-cad inay ku qaadaan ciida Ruushka koobka aduunka sanad ciyaareedkan, iyadoona Marcelo uu kamid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan, waliba qaab ciyaareedka cajiibka ah mar walba sameeya.
Sikastaba, inkastoo ay dhaawacyo wareeriyeen xidigaan fasal ciyaareedkan, wuxuu wali yahay mid bandhig sare ku jira, 33 kulan oo uu udheelay Real Madrid dhamaan tartamada oo dhan wuxuu shabaqa soo taabtay Saddex, isagoona caawiyay Todoba kale.
BrazilCoutinhoDani AlvesMarceloReal Madrid